Mashruuca Sharciga Beeraha
Mashruuca Sharciga Beeraha Farmworker wuxuu siiyaa caawimaad sharciyeed soogalootiga iyo xilliyada beeraha xilliyada gobolka oo dhan. Shaqaalaha Mashruuca Sharciga Beeraha Farmworker waxay u safraan xeryaha shaqada dhammaantiis Gobolka New York, iyagoo bixinaya agab waxbarasho oo laba luqadle ah iyo wakiil sharci ah. Mashruuca Sharciga Beeraha shaqaaluhu waxay caawimaad siiyaan shaqaalaha beeraha iyo qoysaskooda arrimaha sharciyeedka muhiimka ah sida sheegashada mushaarka, caafimaadka iyo goobta shaqada, xaalada guryo ee hooseysa, arrimaha socdaalka, iyo, ka ganacsiga dadka.
Sidee loo Codsadaa
Mashruuca Sharciga Beeraha ee Beeraleyda ayaa qaldama dhammaan gobollada gobolka New York waxaana lagala xiriiri karaa lacag la’aanta:
Laga soo bilaabo Mareykanka 1-800-804-8575
Laga soo bilaabo Jamaica 1-800-248-2429
Laga soo bilaabo Mexico 00 1-877-248-2429
Ku Dhaqanka Shaqooyinka Cadaaladda ah
Ururka Caawinta Sharciga ee Mid-New York, Inc., iyo Pine Tree Assistance Assistance ee Maine waxay la shaqeeyaan Waaxda Caddaaladda ee Mareykanka ee La-Talinta Khaaska ah (OSC) ee Takoorka Shaqaale La'aanta ee Socdaalka si looga ilaaliyo soogalootiga iyo shaqaalaha muwaaddinka inay noqdaan midab kala sooca loo shaqeeyaha.
Shuruucda ka hortagga takoorida ee soogalootiga iyo dhalashada ayaa ka ilaaliya shaqaalaha haajiriinta noocyada soo socda ee takoorka shaqada:
Sinaan la'aanta ku saleysan asalka wadanka, ay ka mid tahay in aan la shaqaaleysiin ama aan eryin shaqaale ku saleysan muuqaalkiisa / dhalashadeeda, lahjadiisa ama meeshii uu ku dhashay.
Takoorista ku saleysan heerka muwaadinimada (tusaale ahaan, haysashada dhaqan ku shaqeysashada "muwaadiniinta-kaliya");
Sinaan la'aanta ku saleysan dukumentiga oggolaanshaha shaqada ee foomka I-9 (tan waxaa loo yaqaan "dukumeenti dukumeenti ah") waxaana ku jira dalbashada dukumiinti ka badan ama ka duwan kan loo baahan yahay hanaanka sharciga I-9.
Takoorka ficil ama hanjabaad aargudasho, oo ay kujirto in la toogto ama lagu takooro takoorista shaqaalaha cadeeya xuquuqdooda shaqaalah sharciga.
Macluumaad dheeri ah, fadlan la xiriir Ururka Gargaarka Sharciga ee Mid-New York, Inc. at (845) 256-9096 ama (800) 804-8575, ama si toos ah ula xiriir Xafiiska Talo Bixinta Gaarka ah toos ula xiriir shaqaalahooda ama khadka loo shaqeeyaha. OSC waxay isku dayeysaa inay soo dhex gasho muranka loo shaqeeyaha iyo shaqaalaha oo ay ku xalliso si aan rasmi ahayn.
Khadka Tooska ee Shaqaalaha:
Khadka Tooska ah ee Loo shaqeeyaha:
Sidoo kale, eeg Xafiiska Qareenka Gaarka ah bogga si aad u hesho macluumaad dheeraad ah. Tan waxaa ku jira macluumaadka loo shaqeeyayaasha sida looga fogaado falalka aan sharciga ahayn.
Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan noocyada kale ee takoorida asalka ah ee wadanka, booqo Xafiiska Xuquuqda Madaniga: